१९५० को सन्धि परिमार्जन हुँदै : इपीजी बैठक
आशा थपलिया २९ पुस २०७४ नयाँ दिल्ली : नेपाल भारत प्रबुद्ध समूहको संयुक्त बैठक भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा सुरु भएको छ। दिल्लीको इन्स्टिच्युट फर डिफेन्स एण्ड एनालाइसिस (आइडीएसए) भवनमा बिहीबार बिहान
अच्युत रेग्मी, काठमाडौँ, २७ पुस : नेपालको एकीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएका पृथ्वीनारायण शाहको दिव्ययोपदेशको स्मरण गर्दै आज राष्ट्रिय महत्वका साथ पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस मनाइएको छ ।
मोडल नेपाल – २०१८ मा ४७ प्रतिस्पर्धी
काठमाडौँ, २६ पुस २०७४ : ‘दी सुपर मोडल नेपाल – २०१८’ को लागि ४७ जना मोडल प्रतिस्पर्धामा आएका छन् । ४७ जना मध्ये एकजना सन् २०१८ को सुपर मोडलको बन्ने
मुम्बई, २६ पुस २०७४ : बलिवुडमा निकै चर्चित भएका अभिनेता ऋतिक रोशन ४४ वर्षमा प्रस्थान गरेका छन् । उनको जन्म १० जनवरी, १९७४ मा भएको थियो । फिल्म क्षेत्रमा २०००
१. मानिसले सफल हुनका लागि हरसम्भव मिहिनेत गर्छ । विभिन्न हतकन्डा अपनाउँछ, आइडिया निकाल्छ । प्लेटो भने मानिस सफल हुनका लागि तीन चिजको आवश्यकता पर्ने बताउँछन्– इच्छा, भावना र ज्ञान
गन्धर्व नहुँदा गावैँ शून्य !
म्याग्दी । कुनै समय गीत गाउने (गन्धर्व) गाइने दाइ आएनन् भने गाउँघर शुन्य जस्तै लाग्थ्यो । एक ठाउँको घटना अर्को ठाउँमा गीतमार्फत सुमधुर स्वरमा गाउँदै जनतालाई पुलकित तुल्याउने (गन्धर्व) गाइने